Thet Thet Aung၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Thet Thet Aung's Apps
Thet Thet Aung's Likes
Thet Thet Aung's ၏မိတ်ဆွေများ
Thet Thet Aung's Groups
Thet Thet Aung သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Thet Thet Aung၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
ညီထွေး သည်Thet Thet Aung's ၏ 'အချိန်၃မိနစ်ပေးဖတ်ပါ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ သည်Thet Thet Aung's ၏ 'အချိန်၃မိနစ်ပေးဖတ်ပါ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သစ္စာအနက် (၁၆) ချက်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်thein wai's ၏ 'ဘုရားရှင်၏ “မာတုဂါမများနှင့် ဆက်ဆံရေး”။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်thein wai's ၏ '“ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ ဆုံးမစာ (၃) ”' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်thein wai's ၏ 'လောကီလူသားနှင့် ကာမဂုဏ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်thein wai's ၏ 'အများအကျိုးအတွက် ပရဟိတဆိုတာ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung shared thein wai's blog post on Facebook
Thet Thet Aung သည်thein wai's ၏ 'ဒိဌိ၏ အထင်မှားမှုကြီးများ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်thein wai's ၏ 'စိတ်ဓာတ်မွန်မြတ်မှ လုပ်ငန်းလည်း မွန်မြတ်ပါလိမ့်မယ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung's Blog
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 11, 2015 တွင်11:55pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဖိနပ် စီးသင့် မစီးသင့်
ဒီဘလော့ကို မေ 15, 2015 တွင်2:05am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment7Likes
(မုံလယ် ကတော့ စီးခွင့်ပြုထားပါသည်)
အရှင်ဘုရား၊ ယခုခေတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ရိပ်သာတို့တွင် ဘုန်းကြီးက ခွင့်ပြုသည်ဆို၍ ဖိနပ်များ စီးနေကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးက ခွင့်ပြု၍ ရ-မရ အပြစ် ရှိ-မရှိ သိလိုပါသည်။ တဆက်တည်း ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီး ခြေဖ၀ါး ဓားခွဲခံရခြင်းသည် မည်သည့်ကံ၏အကျိုး ဖြစ်ပါသနည်း။ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတွင် လူမှမဟုတ်၊ ရဟန်းသံဃာများပင် ကျောင်းပိုင်ဘုန်းကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင်…
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 12, 2015 တွင်1:53am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏... တပြည့် သာဝကများတွင်
>>>>>> ပထမအရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာ၊ ဒုတိယ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်နှင့်
>>>>>> တတိယသာဝကမှာ အရှင်မဟာကဿပဖြစ်ပါသည်။ အဂ္ဂသာဝကနှစ်ပါးလုံး ဘုရားရှင်ထက်
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 24, 2015 တွင်1:14am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments4Likes
ခန္ဓာ အာယတန ဓါတ် သစ္စာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အရှုခံ အရှုညဏ် ပညတ် ပရမတ် သမထ ၀ိပဿနာ အဖြစ် အပျက်ကိုခွဲခြားမသိ သရဏဂုံမသန့်ရှင်း သီလမစင်ကြယ် သက္ကာယ သဿတ ဥစ္စေဒ ဒိဌိတို့ကို အသိညဏ် ( ညာတပရိညာ) အားဖြင့်မပြုတ် အသက် လိပ်ပြာ အကောင် အတ္တ အယူဝါဒများလွှမ်းမိုးပြီး အယူဝါဒအားဖြင့်ဆုတ်ယုတ်နေသောကြောင့် ယုတ်သောယောဂီဟုခေါ်သည်။
ဆရာ့ညဏ်ဖြစ်သော ညာတပရိညာ အားဖြင့် ဒိဌိကိုအသိဖြုတ်ဖြင့် ပြုတ်၏။…
12:01pm အချိန်သြဂုတ် 30, 2016, တွင် အ၇ူးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
https://www.youtube.com/watch?v=Nwjnm0H09wI.......ယုံကြည်နေခဲ့သော အချစ်က မရေရာတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို အကြောင်းပြ သူလေ ရက်ရက်စက်စက် ခွဲခွာခဲ့တာ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်.. အတူတူဆိုနေခဲ့သော သီချင်းတွေ ဒီချိန်မှာ ပိုလွမ်းမိတယ်..ကလေးရေ...တကယ်ကို အရင်းနှီးများတဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေ ကြည်ဖြူသူရင်မှာ..တချို့ချို့အတွက်မလွယ်ပေမယ့် ကိုယ်ဟာ ရုန်းကန်လာခဲ့ဖူးတယ်... ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့သမျှ အချည်းနှီးပဲကွယ်..ဘ၀က အဲလိုပဲကွယ်..ဝေးရမယ်ဆိုရင်လည်း တကယ်ကို အစွမ်းကုန် ကိုယ်ခွင့်လွတ်မယ်..မသာယာနိုင်တဲ့ လမ်းမျိုးနဲ့တော့ ဘယ်သူလာချင်မလဲ ကိုယ့်ချစ်သူလေး.........................................။ မခံချင်စိတ်နဲ့ လောကလမ်းထဲ ကြိုးစားခဲ့သူမှာ...ယုံကြည်ချင်စရာ အနာဂတ်မရှီရင် လူဆိုတာ ပျက်စီးတတ်တဲ့ အချစ်ရာ.တခါခါ ရှုံးနိမ့်ဖူးသော နောက်ထပ် အရှုံးတွေ..ကြည်ဖြူသူရင်မှာ.........................???
8:38pm အချိန်မေ 28, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးဖို့ ပျက်ကွက်တာကို ဖြည့်စွက်တဲ့အနေနဲ့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်အစ်မ
12:36pm အချိန်အောက်တိုဘာ 20, 2014, တွင် ဉာဏ်လင်းမြို့ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
"ဓမ္မမိတ်ဆွေ( ဒေါ်)Thet Thet Aung ခင်ဗျား "
၀ိနိစ္ဆယများ နဲ့ ပတ်သက်၍ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရန် Link ပေးပို့ပါသည်။
7:46pm အချိန်မေ 9, 2014, တွင် ဖိုးကံထူး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
Good! u take meditation
12:14am အချိန်မေ 6, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:31am အချိန်မတ် 23, 2014, တွင် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဒုတိယ အပတ်တရားစခန်းက သင်္ကြန်တွင်းပဲလေ ၀င်မယ်ဆိုအခုကတည်းက စာရင်းပေးလို့ရပြီ
1:56pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 9, 2014, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လေးစားရပါသော ဓမ္မအဆွေတော် မသက်သက်အောင်ခင်ဗျာ။
မိတ်ဆွေတင်ထားသည့် (မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိုးကုတ်မြို့ ၌ ဟောကြားသော တရားတော် ဟိုဘ၀ ဒီဘ၀၊ ဆုမတောင်းပါနဲ့ (အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး) ဟောကြားသည့်နေ့ (၄-၅-၆၂) ) ဘလော့သည် အစမှ အဆုံးအထိ အပြည့်အစုံ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ တရားစာသား တချို့ ကျန်နေသေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မှို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး နောက်ထပ်တဖန် ထပ်မံတင်ပေးပါရန် လေးစားစွာ အသိပေး အပ်ပါသည်။ အခြားဆိုဒ်မှာ ကူးယူဖော်ပြတယ်ဆိုရင်လဲ မိမိကူးယူတဲ့ ဆိုဒ်လင့် နှင့် စာအုပ်မှ ကိုယ်တိုင်ရိုက်နှိပ်တင်ပြတယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်စာအုပ်မှ တင်ပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အောက်အဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးပါခင်ဗျာ။ လေးစားစွာဖြင့်.....
12:52pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 9, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:40pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 7, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မိတ်​​ဆွေကို ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်​ ဓမ္မမိသားစုမှ ​နွေး​ထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏